किन खाने जाडोमा ओखर ?
न्यूजलय सोमबार ०४, मङि्सर २०७४
ओखरले जाडोमा शरीरलाई तातो र ऊर्जाशील बनाउँछ । जाडोमा यसको सेवनले शरीरलाई पुर्याउँछ । यसमा जरूरी पोषक तत्त्व, मिनरलहरू, एन्टीअक्सिडेन्ट र भिटामिन हुन्छन् जसले शरीरका धेरै रोगहरू भगाउँछन् । दिनको एउटा ओखर खानुका फाइदा यस्ता छन् :
दिनदिनै एउटा ओखर खाँदा शरीरमा ऊर्जा कायम....
​अफिसमा काम गर्दा गर्दै यस्तो व्यायाम गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्
अफिसमा घन्टौं काम गर्दा शरीरका विभिन्न अंगहरूमा पीडा हुन्छ । यसलाई लामो समय बेवास्ता गर्दा गम्भीर रोग पनि लाग्न सक्छ । अफिसमा कम्प्युटरमा काम गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ कुर्सीबाट उठ्न पनि भ्याइँदैन ।
कार्यालयमा कुर्सीमा बसेर लगातार आठ घन्टा काम गर्दा गर्दन, काँध र कम्मर....
​स्वस्थ शरीरका लागि 'हेल्दी होम'
न्यूजलय आइतबार ०३, मङि्सर २०७४
धरान । धरान १५ बाझगरा बस्ने ३३ वर्षकी मन्दिरा घिमिरेलाई घाँटीमा समस्या देखा परेपछि उनी अस्पताल पुगिन् । डाक्टरले अपरेशन गर्नुपर्ने बतायो, तर मोटोपनकोे कारण उनको अपरेसन भएन । तौल घटाउन मन्दिराले एक महिनामा कति दिन सम्म त खाना समेत नखाइ सुप मात्र खाएर बसिन्,....
​यस्ता छन् दारीभित्र लुकेका स्वास्थ सम्बन्धी रहस्यहरु
न्यूजलय शनिबार ०२, मङि्सर २०७४
आजकाल पुरुषहरुले दारी पाल्न थालेका छन् । अचम्म लाग्ला तर, दारीबाट नै स्वास्थको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार दारीबाट मानिसको छालाको धेरै समस्याहरुको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । थाहा पाइराखौं दारीमा स्वास्थ सम्बन्धी कस्ता रहस्यहरु छन् ?
१. यदी तपाईको दारी धेरै....
किन खाने फर्सी ? यस्तो छ कारण
फर्सी धेरै उपयोगी फल हो । फर्सीको लहराको मुन्टा, पात, फूल र फल सबै उपयोगी नै हुन्छ ।
फर्सीमा भिटामिन ‘ए’ प्रशस्त पाइन्छ । यसले कमलपित्त, क्षयरोग, बढी तिर्खा लाग्ने, कलेजोमा खटिरा भएमा औषधिका रूपमा समेत काम गर्छ । कब्जियत भएमा तथा टाउको दुखेमा....
​दिनदिनै अम्बा खानुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्
न्यूजलय शुक्रबार ०१, मङि्सर २०७४
अम्बामा कम क्यालोरी र कम चिनी हुने भएकाले दिनको एउटा अम्बा खानाले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।
भारतको राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका डा. अरुण दधीचबताले अम्बाको अचार वा जुस बनाएर खाँदापिउँदा पनि फाइदा हुने बताएका छन् ।
अम्बाको पातमा एन्टीब्याक्टेरियल प्रपर्टी हुनाले डण्डीफोरजस्ता छालाका....
न्यूजलय बिहीबार ३०, कार्तिक २०७४
त्यसका लागि अण्डा निकै लाभदायक भएको पाइएको छ । एक अध्ययन अनुसार अण्डाको बोक्राले छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ ।....
​युवा अवस्थामै कपाल फुलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
यदि तपाईको युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्या देखिएको छ भने अब त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिने छ । कपाल मानिसको पर्सनालिटीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अंग हो । कालो कपालले मानिसको पर्सनालिटीलाई बढाउँने गर्दछ । तसर्थ युवा उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन यी सजिला घरेलु उपाय....
​बारम्बार ऐठन भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
न्यूजलय मङ्गलबार २८, कार्तिक २०७४
के तपार्इलार्इ राती सुत्दा नराम्रो सपना अथवा एेठन हुने गर्छ ? कसैलाई त दैनिक त्यस्तै समस्याले सताउने गर्छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि शास्त्र अनुसार यसो गर्नुहोस् ।
१.चक्कु : वास्तुशास्त्रका अनुसार दैनिक डरलाग्दो सपना देखेर हैरान हुनुहुन्छ भने सिरानीमुनि चक्कु राख्नुहोस् ।< p>
​किड्नी हस्पिटलले निःशुल्क सुगर जाँच गर्ने
न्यूजलय सोमबार २७, कार्तिक २०७४
विराटनगर । विराटनगरस्थित नेशनल किड्नी हस्पिटलले निःशुल्क चिनी रोग परीक्षण गर्ने भएको छ । कार्तिक २८ र २९ गते हस्पिटलले निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएको हो । बिरामीले खाना खानु अघि र खाना खाएपछि आफ्नो शरीरमा भएको सुगरको मात्रालाई निःशुल्क जाँच गर्न सक्नेछन् ।